Anatase dia singa mineraly vita amin'ny titanium dioksida - horonan-tsary
Ny Anatase dia mineraly vita amin'ny titanium dioksida. Ny mineraly ao anaty natiora dia matetika atrehana toy ny mainty mainty, na dia tsy misy loko na fotsy aza ny fitaovana madio. Ny endrika mineraly roa amin'ny zavamisy azo avy amin'ny TiO2 dia fantatra, brookite ary rutile.
Ny Anatase dia hita foana toy ny kristaly kely sy mitokana ary maranitra ary, toy ny baomba mandavantaona thermodynamically stabil, dia manelingelina amin'ny rafitry ny tetragonal izany. Ny Anatase dia azo refesina amin'ny mari-pana rehetra sy ny fanerena, miaraka amin'ny rutile polymorph equilibrium. Na izany aza, ny anatase dia matetika ny dingana dioksida titanium izay mamorona amin'ny dingana maro, noho ny angovoany ambany, miaraka amin'ny fiovan'ny rutile mitranga amin'ny mari-pana avo. Na dia mitovy ny haavon'ny symmetry ho an'ny dingana ara-anatase sy rutile dia tsy misy ifandraisany ny zoro elanelana misy ny mineraly roa, afa-tsy ao amin'ny faritra zaridaina 45 ° sy 90 °. Ny piramida tazomaha mahazatra, mifanitsy amin'ny endriny izay misy làlaka tonga lafatra, manana zoro amin'ny tendron'ny polar 82 ° 9 ′, ny zoro mifanaraka amin'ny rutile dia 56 ° 52½ '. Noho io piramida mivaingana io,
Ny fomba fitomboana roa kristaly dia mitombo. Ny mahazatra indrindra dia miseho toy ny piramida davam-pandeha tsotra miaraka amin'ny indigo-manga ho an'ny loko mainty ary ny felana mavesatra. Ny kristaly amin'ity karazana ity dia be dia be ao amin'ny Le Bourg-d'Oisans any Dauphiné, izay ifandraisany amin'ny vatolampy-kristaly, feldspar, ary tsy misy fetra ao amin'ny crevice amin'ny granita sy mika-schist. Ny kristaly mitovy amin'izany, fa ny haben'ny mikroskopika, dia miparitaka be amin'ny vatolampy sedimentary, toy ny fasika, vakana, ary vato, izay mety hampisarahana azy ireo amin'ny famafana ny vovoka mivelatra amin'ny vatam-bovitra. Ny fiaramanidina amin'ny anatase no tena thermodynamically stabiliste ary noho izany dia endrika fampisehoana be mpampiasa indrindra amin'ny anatase voajanahary sy synthetic.
Ny kristaly amin'ny karazana faharoa dia manana endrika piramida marobe, ary mazàna malefaka na indraindray prismatic amin'ny fahazarana, ny loko dia mavo-volontany mavo. Ny kristaly toy izany dia mitovitovy amin'ny xenotime amin'ny endriny ary, tokoa, fa nandritra ny fotoana ela dia tokony ho an'ity karazana ity, ny anarana manokana hender dia ampiharina amin'izy ireo. Izy ireo dia miraikitra amin'ny rindrin'ny fongona any amin'ny gneisses Alps, ny Binnenthal akaikin'i Brig ao canton Valais, Soisa, izay toerana fanta-daza. Voajanahary pseudomorphs rutile aorian'ny aody dia fantatra koa.
mividia ny anatase voajanahary ao amin'ny magazay